KOOWAAD: Martin Vrijland
Hoaxes iyo calanka been abuurka ah: iyada oo loo marayo falsafada, ka-hor-tagga iyo soo-saarka Axdiga Cusub ee New World
Filed in BUUGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 14 April 2017	• 16 Comments
Waxay u muuqataa in ay sii adkaaneyso in la fahmo sida ciyaarta loo ciyaaro shaambada caalamiga ah. Dunida meelo kale oo warbaahin ah, waxaa jira qaar ka mid ah kuwa soo jiitay Donald Trump iyo kuwa kale ee u arka in Putin uu yahay nin la dagaalama Amarka New World. Munaasabadan oo ay ka soo qayb galeen [...]
Nabadgalyo, war-saxaafadeed, raali-gelin, calaamad been ah, warbaahinta iyo siyaasadda; maxaa run ah iyo waxa aan run ahayn?
Filed in BUUGA, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	on 28 December 2016	• 63 Comments
Waxaan aragnay argagixisannimo sannadihii ugu dambeeyay. Website-kani wuxuu mararka qaarkood soo sheegaa oo mararka qaar wuxuu soo gebogebeeyaa in waxyaabuhu aysan sax ahayn. Falanqeeyayaasha qaarkood waxay keeneen in gabagabadii la sameeyay iyo kuwo kale oo ku jiray 'calan been ah'. Taas micnaheeda ma ahan in weerar kasta [...]
Guud ahaan Wadarta: 1.343.837